သင် သူတစ်ပါးကို ကူညီသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း – Gentleman Magazine
သင် သူတစ်ပါးကို ကူညီသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း
ကျွန်မဟာ လေဆိပ်တစ်ခုကို ရောက်နေတာပါ။ ကျွန်မရဲ့ နေ့လည်စာ အထုပ်ကို ဆွဲပီး ထိုင်စားလို့ရတဲ့နေရာ လိုက်ရှာနေတာပါ။ လမ်းဘေး ဆိုင်လေးတစ်ခုမှာ လူတစ်ယောက်ကလွဲပြီး ခုံတွေ အကုန်အားနေပါတယ်။ အဲဒိမှာ ထိုင်ပြီးစားမယ်လုပ်တော့ စားပွဲထိုးက လာပြောတာ ဘာမှ မဝယ်ရင် ထိုင်လို့မရပါဘူး တဲ့။ ကျွန်မက နောက်နေတယ် မှတ်တာပါ။ ပြီးတော့ သူက အတည်ကြီးလာပြောနေတော့ တော်တော်လေး ဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ စားပွဲထိုးက မန်နေဂျာ သွားခေါ်မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားတော့ ကျွန်မလဲ ပေထိုင်နေပါတယ်။ အဲဒိအချိန်မှာ ဘေးခုံကလူက ကျွန်မကို ရေဘူး အသစ်တစ်ဘူး လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ “ကဲ အခု နင် ရေဘူးဝယ်ထားတာရှိပြီ သူတို့ နှင်ထုတ်လို့ မရတော့ဘူး။ အဲဒီဘူးက ပိုက်ဆံပေးပြီးသား ” ဆိုပြီး ကျွန်မ ဘာမှမပြောနိုင်ခင် ထထွက်သွားပါတယ်။
ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ အရမ်းရှက်မိပါတယ်။ ဟိုလူကိုလဲ အရမ်းလေးစားမိပါတယ်။ ကျွန်မက စကားများဖို့မလိုတဲ့အချိန်မှာ စကားများမိတယ်၊ သူက ကျွန်မကို ကူညီစရာမလိုပဲ ကူညီခဲ့တယ်။ အဲဒိလူရဲ့ မိသားစုတွေ သူ့အတွက် ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူမလဲ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေရော ဘယ်လောက် တန်ဖိုးထားမလဲ။ သူက ကျွန်မထက် စိတ် တည်ငြိမ်တယ်ဆိုတာကတော့ ကျိန်းသေပေါက်ပါပဲ။ ကူညီတတ်တဲ့လူတွေဟာ ကူညီခြင်းရဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ခံစားရပါတယ်။
– သူတစ်ပါးကို ကူညီလိုက်တာဟာ ကျွန်တော်တို့ကို စိတ်အားတက်ကြွစေပါတယ်။
– သင့်ဇနီးကို ကူညီတာဟာ အောင်မြင်တဲ့ အနာဂါတ်အိမ်ထောင်ရေးကို မျှော်မှန်းလို့ရပါတယ်။
– ကူညီခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
– နေမကောင်းတာ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါမှာ ကူညီတတ်ခြင်းဟာ သင့်ကို ပြန်ကူညီမယ့်သူများစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ပါးစေပါတယ်။
ကူညီခြင်းက ဒီလောက် အကျိုးကြီးမားတာတောင် ဘာလို့ မကူညီကြတာလဲ? ကျွန်တော်တို့က ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ လောကကြီးမှာ နေထိုင်တာပါ။ မတတ်နိုင်တဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် သင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အခါ မကူညီလိုက်ဖို့ ပိုများပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာနေတဲ့ အကျင့်က စွဲနေပါပြီ။ သူတစ်ပါးတွေကို ကူညီမိဖို့က ကူညီတာတွေကို အကျင့်ဖြစ်အောင် လုပ်တာပါပဲ။ တစ်နေ့ကို ကူညီမှု တစ်ခု အနည်းဆုံးလုပ်မယ်လို့ အဓိဋ္ဌာန် ပြုထားပါ။ တစ်နေ့ကိုတစ်ခါ သင်ကူညီစရာ မလိုပေမယ့် သင် ကူညီချင်တာ တစ်ခုကို ကူညီမယ်လို့ အဓိဋ္ဌာန်ပြုထားပါ။ နောက်ပိုင်းမှာကြာသွားရင် လွယ်တဲ့ဟာတွေ၊ သင်ကူညီချင်တဲ့ဟာတွေမက ခက်တဲ့ဟာတွေ၊ သင် မကူညီချင်တဲ့ဟာတွေကိုပါ ကူညီနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကူညီခြင်းဟာ အကျိုးအများကြီး ရှိပါတယ်။ တခြားသူတွေကို ကူညီပြီး သင့်ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါတော့။
သငျ သူတဈပါးကို ကူညီသငျ့တဲ့ အကွောငျးရငျး
ကြှနျမဟာ လဆေိပျတဈခုကို ရောကျနတောပါ။ ကြှနျမရဲ့ နလေ့ညျစာ အထုပျကို ဆှဲပီး ထိုငျစားလို့ရတဲ့နရော လိုကျရှာနတောပါ။ လမျးဘေး ဆိုငျလေးတဈခုမှာ လူတဈယောကျကလှဲပွီး ခုံတှေ အကုနျအားနပေါတယျ။ အဲဒိမှာ ထိုငျပွီးစားမယျလုပျတော့ စားပှဲထိုးက လာပွောတာ ဘာမှ မဝယျရငျ ထိုငျလို့မရပါဘူး တဲ့။ ကြှနျမက နောကျနတေယျ မှတျတာပါ။ ပွီးတော့ သူက အတညျကွီးလာပွောနတေော့ တျောတျောလေး ဒေါသထှကျသှားပါတယျ။ ပွီးတော့ စားပှဲထိုးက မနျနဂြော သှားချေါမယျဆိုပွီး ထှကျသှားတော့ ကြှနျမလဲ ပထေိုငျနပေါတယျ။ အဲဒိအခြိနျမှာ ဘေးခုံကလူက ကြှနျမကို ရဘေူး အသဈတဈဘူး လှမျးပေးလိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ “ကဲ အခု နငျ ရဘေူးဝယျလိုကျတော့ သူတို့ နှငျထုတျလို့ မရတော့ဘူး။ အဲဒိဘူးက ပိုကျဆံပေးပွီးသား ” ဆိုပွီး ကြှနျမ ဘာမှမပွောနိုငျခငျ ထထှကျသှားပါတယျ။ ကြှနျမကိုယျကြှနျမ အရမျးရှကျမိပါတယျ။ ဟိုလူကိုလဲ အရမျးလေးစားမိပါတယျ။ ကြှနျမက စကားမြားဖို့မလိုတဲ့အခြိနျမှာ စကားမြားမိတယျ၊ သူက ကြှနျမကို ကူညီစရာမလိုပဲ ကူညီခဲ့တယျ။ အဲဒိလူရဲ့ မိသားစုတှေ သူ့အတှကျ ဘယျလောကျဂုဏျယူမလဲ။ လုပျဖျောကိုငျဘကျတှရေော ဘယျလောကျ တနျဖိုးထားမလဲ။ သူက ကြှနျမထကျ စိတျ တညျငွိမျတယျဆိုတာကတော့ ကြိနျးသပေေါကျပါပဲ။ ကူညီတတျတဲ့လူတှဟော ကူညီခွငျးရဲ့ သိပ်ပံနညျးကြ အကြိုးကြေးဇူးတှေ ခံစားရပါတယျ။ – သူတဈပါးကို ကူညီလိုကျတာဟာ ကြှနျတျောတို့ကို စိတျအားတကျကွှစပေါတယျ။ – သငျ့ဇနီးကို ကူညီတာဟာ အောငျမွငျတဲ့ အနာဂါတျအိမျထောငျရေးကို မြှျောမှနျးလို့ရပါတယျ။ – ကူညီခွငျးဟာ ကြှနျတျောတို့ကို ပြျောရှငျစပေါတယျ။ – နမေကောငျးတာ၊ အခကျအခဲတှနေဲ့ ကွုံရတဲ့အခါမှာ ကူညီတတျခွငျးဟာ သငျ့ကို ပွနျကူညီမယျ့သူမြားစပွေီး စိတျဖိစီးမှု လြော့ပါးစပေါတယျ။ ကူညီခွငျးက ဒီလောကျ အကြိုးကွီးမားတာတောငျ ဘာလို့ မကူညီကွတာလဲ? ကြှနျတျောတို့က ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့ လောကကွီးမှာ နထေိုငျတာပါ။ မတတျနိုငျတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတျ သငျနဲ့မဆိုငျတဲ့အခါ မကူညီလိုကျဖို့ ပိုမြားပါတယျ။ ကိုယျ့ဘာသာနတေဲ့ အကငျြ့က စှဲနပေါပွီ။ သူတဈပါးတှကေို ကူညီမိဖို့က ကူညီတာတှကေို အကငျြ့ဖွဈအောငျ လုပျတာပါပဲ။ တဈနကေို့ ကူညီမှု တဈခု အနညျးဆုံးလုပျမယျလို့ အဓိဋ်ဌာနျ ပွုထားပါ။ တဈနကေို့တဈခါ သငျကူညီစရာ မလိုပမေယျ့ သငျ ကူညီခငျြတာ တဈခုကို ကူညီမယျလို့ အဓိဋ်ဌာနျပွုထားပါ။ နောကျပိုငျးမှာကွာသှားရငျ လှယျတဲ့ဟာတှေ၊ သငျကူညီခငျြတဲ့ဟာတှမေက ခကျတဲ့ဟာတှေ၊ သငျ မကူညီခငျြတဲ့ဟာတှကေိုပါ ကူညီနိုငျသှားပါလိမျ့မယျ။ ကူညီခွငျးဟာ အကြိုးအမြားကွီး ရှိပါတယျ။ တခွားသူတှကေို ကူညီပွီး သငျ့ရဲ့ ကမ်ဘာကွီးကို ပွောငျးလဲလိုကျပါတော့။
Previous: သင် လေ့လာသမျှ အကုန်မှတ်မိနေစေဖို့ နည်းလမ်း ၄ မျိုး
Next: လိင်မှုဘဝကို ဒုက္ခပေးမည့် စားစရာ များ